जब बिज्जीको वक्षस्थलमा हात पुग्छ …! « Surya Khabar
जब बिज्जीको वक्षस्थलमा हात पुग्छ …!
त्यसपछि उसको कल्पनाको बाहुमा कसैले करौँती चलाएजस्तो हुन्छ, त्यसपछि बुबाले केहि माया त गर्नेनै छन् । छि बुबाले मेरो ज्यानमा हातहालेको मलाई मनै पर्दैन । आजभोली कस्तो असजिलो र नमिठो लाग्छ । बरु झपारे कुटे केहि नहोला । हेर ईश्वर म ठुली भैसकेनि । छि बुबाले मलाई नछोईकन माया गर्न किन नसकेको होला ? के माया गर्दा छुनै पर्छर बुबाका साथीहरु पनि कैले त यसो छुन खोज्छन् ।
कोई त छोईहाल्छन् पनि । करौँतीको रेटाईलाई बन्द गर्दै कोठाको भित्ताभरि बुबालाई सजाउँछे अनि सोच्छे जे भएपनि मेरो यो सँसारमा बुबाबाहेक को नै छ र ? कसले गर्छ र मलाई माया बुबा बाहेक खान लाउन मलाई कुनै छेकबार छैन । कस्तो लगाएकि छु, यस्तो माया मलाई कसले गरेको छ । कसले गरेको छ, यो प्रश्न उसको कलिलो मानसिकतामा यताबाट उता उताबाट, यता प्रतिनिधित्व हुँदै ठक्कर खाँदै पहराबिच थर्केको आवाजजस्तै घन्किरहन्छ । उनित्तर छैन उसको एउटा जबाफ यसरि प्रतिध्वनि हुन्छ । बुवा, बुवा, बुवा
आजको रात औँसिको कालो रात त्यसमा पनि भदौको घाम पानी दिनमा रातमा पनि हुन्छ । छोटो दिन रात धर्तिमा ओर्लिदैमा भागेको हुँदैन । समयको गति उहिँ हो घडिको चाल उहिँ हो, आजभोलि बिज्जी नाडिमा स्वचालित आयमको घडि लगाएर हिड्छे राधिका । मिनु बिरामी छे, अहिले बिज्जीले नयाँ साथी पाएकी छे देबिका ।
सबा सात भएर झमक्क रात परेपछि समसा खाएपछि बिज्जि र देबिका छुटिन्छन । त्यो दिनका लागि बिज्जीको हिडाईमा अब एक किसिमको अनौठो तर आकर्षक लोच देखिन थालेको छ । अनुहार कलिलै छ, तर हुर्किएकि छे सप्तरङ्गि उमेरमा टेक्न अब धेरै बाकिँ छैन । शरीरले यसै भन्छ, दुधे कर्कलाको कलिलो गुवा जस्तो कलकलाउदो भएकि छे । आजभोलि तेति कालि होईन राति देखिन्छे । बिज्जी डेरामा आईपुग्दा उसको बुबा अर्थात यादब आईसकेको छैन । रातको नौ बजेतिर बिज्जीले बाहिर चिहाएर हेरि आकासमा तारा छैनन् ।
बादलले टम्म ढाकिएको छ । केहि उकुसमुकुस छ । एकै क्षणपछी छटाकछुटुक पानी पर्न थाल्छ । त्यसपछि झरिनै पर्छ । बिज्जी भान्छामा गएर रामसुखलाई सोध्छे रामसुखा बुबा कहिले आउनुहुन्छ । आज मलाई के पता मैयाँ मालिकको आफ्नो मर्जी सायद आज ढिला आउनुहुन्छ होला । को भन्न सक्छ केई ठेगान छैन । तेसो भए खै अलिकति भात दिनु म त खाएर सुत्छु । बिज्जी टेबलमा बस्छे ।
रातको एघार बज्छ । बिज्जी अघिनै सुत्न गई । मालिकको आगमन नभएपछि रामसुखा पनि खाएर सुत्छ । तेतिनै बेला यादब डेरा फर्कन्छ । थोरै मात्र रक्सि पियर मनग्गे रोटी खान्छ । रामसुख पनि रोटि खान्छ र यादबसँग बिदा हुन्छ र सुत्न जान्छ ।
यादब आफ्नो डेरामा पस्छ अनि कपडा फेर्छ अनि फेरि उ एकपटक बिज्जीको कोठामा पस्छ । जसरि उ दिनहुँ पस्ने गर्छ, अब सडक चकमन्न छ, घरहरु उस्तै हुन् । यादव झ्यालको पर्दा हटाएर ग्रिलबाट बाहिर हेर्छ र अन्दाज गर्छ ।
अँह यो थामिने पानी हैन । कैले त यस्तो झरि पाँचदिनसम्म पर्ने गर्छ । कति निराश हुन्छन् । दिनहरु पर्दा राम्रोसँग लगाएपछि झुलभित्र पँखेटा फिजाएर सपनाको सँसारमा बिचरण गरिरहेकि बिज्जीलाई हेर्छ ।
असमानी नाईटी लगाएर केहि नओढि सुतेकि बिज्जी, उसका बन्द आखाँहरुमा बाटिएका बाक्ला परेलाहरुको ढक्कन, निधारमा मुज्जा परेर पसिनाका केहि थोपासँग टाशिएका कोशहरु, यादब सोच्दै जान्छ ।
यो तेहि बिजुजी हो, जसलाई म अहँ साहु दिपविजयको घरबाट ल्याएको थिएँ । नोकरनि थिई फोहोरि कालि नराम्री हेर अहिले हवाईपुतली जस्तै भई । उ आफै अचम्म हुन्छ । अनि झुलको पद्ला निकाल्छ, खाटमा बस्छ अनि सोच्छ एउया फुल कानमा सिउरिदिन पाए हुनि । बिस्तारै उस्का थरथराएका हातहरु र अनुहार बिज्जीतिर झुकाउँदै लैजान्छ ।
सपनामा खेल्दाखेल्दै भिरबाट खसेझैँ बिज्जी झँसँग हून्छे । देख्छे बुबा आज धेरै नजिक आईसकेको छ र भन्छे बुबा आज उसको बुबा केहि बाहाना गर्दैन र देब्रे हातको चोर औला उसको ओठमा ठडाउँदै चुप लाग्ने सकेँत दिन्छ । त्यसपछि यादब आफ्नो सिँगै शरीर लिएर बिज्जीको बगरमा सुत्छ । बिज्जी अगाब हुन्छे, सोच्छे आज बुबाले अलि बढिनै पिउनु भएछ । केहीछिन पछि जानुहुन्छ होला उ केही बुझ्दिन । बिज्जी उठ्न खोज्छे तर यादवको बलियो हातले उठ्न दिदैन । उ आफ्ना हातहरु बिस्तारै बिज्जीका वक्षस्थल तिर लैजान्छ । क्रमस….